बजार समाचार अपडेट : Koshi Online
इलाम, २१ भदौ । चियाको राजधानी उपनामले चिनिने इलाममा गत वर्षसम्म चिया हेर्न र बुझ्न आउने विदेशी पर्यटकको बाक्लो उपस्थीति हुन्थ्यो । ‘फस्ट फ्लस’ सिजन (चैत–वैशाख) देखि नै चिया हेर्न आउने विदेशी उद्योग/
विराटनगर, २८ साउन । विराटनगरका सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी कटहरी गाउँपालिका– १ मा सञ्चालित कृषि बजारमा वडाअध्यक्षले तालाबन्दी गरेका छन् । बुधबार कटहरी गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष कपुरलाल माझीले तालाबन्द
सुन तोलामा ९०० ले घट्यो
काठमाडौं । आज आइतबार सुनको मूल्य प्रतितोला ९०० रूपैयाँले घटेको छ । शुक्रबार प्रतितोला एक लाख तीन हजार ५०० रूपैयाँ तोकिएको सुनको मूल्य आज एक लाख दुई हजार ६०० रूपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवस
काठमाडौ, २१ साउन । नेपाली सुन बजारमा कीर्तिमान कायम भएको छ । तोलामा १६०० बढेर पहिलोपटक सुनको भाउ एक लाख रुपैयाँ नाघेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले तोकेको नयाँ मूल्यअनुसार आज सुनको भ
मङ्गलबार, ३० बैशाख, २०७७
एनसेलको ब्यालेन्स सकियो ? अनलाइनबाट हुन्छ रिचार्ज
विराटनगर, २६ चैत । कोरोना महामारीको सम्भावित जोखिम नियन्त्रणका लागि सरकारले लक डाउन आह्वान गरेको छ । लकडाउनका कारण बजारपसल बन्द छन् । विपद्को अवस्थामा मोबाइलका रिचार्ज कार्ड पाउन पनि मुस्किल छ ।
काठमाडौं, २६ चैत । कालीमाटीमा केही दिनका लागि फलफुल तथा तरकारीको कारोबार नहुने भएको छ । बजारमा अत्याधिक भिड बड्न थालेपछि केही दिनका लागि कारोबारमा रोक लगाइएको हो । अब विभिन्न ११ ठाउँबाट यस स्थानक
काठमाडौं, ५ फागुन । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज ३४ अङ्कले उकालो चढेको छ । लगातार उकालो लागेको बजारमा सोमबार नेप्सेले नयाँ इतिहास बनाएको हो । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अन
विराटनगर, २९ माघ । प्रदेश १ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिशप्रसाद कुसियैतले नीजि क्षेत्रको सल्लाह र सुझाव अनुसार नै प्रदेश सरकारले उद्योग व्यवसाय सम्बन्धि नीति तथा कानुन तयार गर्ने बत
विराटनगर ५ माघ । रिजालको प्लाष्टिकको पानी टयाँङकी ,सिपिभिसी पाईपले नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरेको छ । एक नम्बर प्रदेशमा एकछत्र व्यापार गरिरहेको र अन्य प्रदेशको बजारमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न स
काठमाडौं २७ पुस । नेपालले चीनका चार सामुद्रिक र तीन वटा सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने भएको छ । नेपाल र चीनबीच भएको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालले चिनियाँ बाटो हुँदै तेस्रो मुलुक
विराटनगर, २७ पुस । निकै उतार चढावका बीच कारोवार हुँदै आएको सुनको मूल्यमा आज सामान्य वृद्धि भएको छ । आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला रु ४०० ले वृद्धि भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएक
जुत्ता मेलामा सेवाग्राहीको चहलपहल बढ्दो
सोमबार, ०७ पुष, २०७६
विराटनगर, ७ पुस । विराटनगरमा जारी ‘विराट फुटवेयर एक्स्पो’ मा सर्बसाधरणको भिड बढेको छ । १ पुसबाट सुरु जुत्ताचप्पल मेलामा सर्बसाधरणको भिड बढेको हो । एकसातामा ३५ लाख बराबरको कारोबार भएको । मेलास
विराटनगर, १४ असोज । दसैँको पूर्वसन्ध्यामा सुनको भाउ घटेको छ । छापावाला तथा तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ८०० ले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । मंगलबार छापावाल सुनको मूल्य रु ६९
काठमाण्डौं १३ असोज । सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत बिक्री गर्ने खसी, बोका तथा च्याङ्ग्राको बिक्री मूल्य निर्धारण गरेको छ । कम्पनीले बिक्री गर्ने जीउँदो खसी, बोकाको मूल्य प
विराटनगर, १२ असोज । लगातार नेपाली बजारमा उच्च अङ्कले मूल्य वृद्धि हुँदै आएको सुनको भाउ आइतबार भने ओरालो लागेको छ । आज छापावाला सुन प्रतितोला रु ७० हजार २०० मा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महास
विराटनगर ९ असोज । तपाइलाई बजारमा गएर किनमेल गर्ने फुर्सद छैन वा झन्झट लाग्छ ? चिन्ता नगर्नुहोस, रोजेको कपडाका बिभिन्न आइटमहरु घरमै बसेर फेसबुक र इन्स्टाग्रामबाट मगाउन सक्नुहुनेछ । गुणस्तरिय रेडीमेड
विराटनगर ८ असोज । स्थानीय प्रशासनले बजार अनुगमन गर्दा विराटनगरको गुद्री बजारका मासु ब्यापारीको भागाभाग भएको छ । दशैं नजिकिदै गर्दा प्रशासनले गरेको गोप्य अनुगमनको सूचना चुहावट भएपछि व्यापारीको भागाभाग
मोरङ, ८ असोज । सेन्ट्रल मल विराटनगरले दशैं तिहार तथा छठ पर्वका लागि नयाँ अफर ल्याएको छ । असोज ११ गतेदेखि एक महिनासम्म लागू हुनेगरी ‘सेन्ट्रल मल महाउत्सव २०७६’ अफर ल्याएको हो । मलले दुईवटा स्कूट
मोरङ, ७ असोज । दशैंका लागि आइतबारबाट नयाँ नोट वितरण गरिने भएको छ । राष्ट्र बैंक क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरले आइतबारबाट सर्वसाधरणका लागि नयाँ नोट वितरणको तयारी थालेको हो । राष्ट्र बैंक क्षेत्रीय का
विराटनगर, २ असोज । भदौ अन्तिम सातादेखि लगातार ओरालो लाग्न थालेको सुनको भाउमा आज फेरि गिरावट आएको छ । आज छापावाला र तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ६०० ले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको
विराटनगर, १ असोज । एनसेलले आफ्ना प्रिपेड ग्राहकका लागि नयाँ योजना ल्याएको छ । एनसेलले ल्याएको ‘मेरो प्लान’ अफरले एनसेलका ग्राहकले अबकुनै पनि समय बिनाकुनै झन्झट एनसेलको आकर्षक डेटा सेवाको प्रयोग गर्न प
विराटनगर, २९ भदौ । पछिल्लो एक सातादेखि निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको सुनको मूल्य फेरि घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार पनि सुनको मूल्यमा गिरावट आएको हो । महासंघका अनुसार छापावाल
विराटनगर, २४ भदौ । विराटनगरमा यमाहाको महामेला सुरु भएको छ । दशैं तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गरी यमाहा माेटरसाइककाे ‘महामेला सुरु गरेको हो । विराटनगरस्थित जैन भवनमा सोमबारबाट सुरु मेला बिहीबारसम्म सञ्
काठमाण्डौ । यूवा बैज्ञानिकहरुले नेपालमा नै उब्जाईएको अदुवाबाट बिभिन्न किसिमको पेय पदार्थ अर्थात सफ्ट ड्रिंङक तैयार गरेका छन । काठमाण्डौ स्थित राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा ७ महिना देखि निरन्तर अनुसन्धा
विराटनगर । तीन दशकयता तयारी खाद्या पदार्थ क्षेत्रमा आफ्ना उत्पादन बजारमा बिस्तार गर्दै आएको काबरा ग्रुपको क्वालिटी थाई फुड्सले चाउमिन पनि बजारमा ल्याएको छ । काबरा ग्रुपले '१२३ चाउमिन' बजारमा ल्याएको ह
घट्यो सुनको भाउ, चाँदीको भाउ भने यथावत
काठमाडौं, नेपाल सुनचाँदी महासंघका अनुसार बुधबार सुनको भाउ घटेको छ । मंगलबारको तुलनामा बुधबार छापावाल सुनको भाउमा गिरावट आएको हो । मंगलबार तोलामा ६१ हजारमा कारोबार भएको छापावाल सुनको भाउ बुधबार